सकियो ग्यास र पेट्रोलियम उत्पादनको सपना अब चुलाचुलामा बिजुलीको तार – Nepal Japan
नेपाली समय : 09:19:57
जापानी समय : 12:34:57
25 October, 2018 17:21 | बिचार | comments | 73950 Views
सपना देख्नुपर्छ, देखाउनुपर्छ तर त्यो सपना यथार्थको कति नजिक छ र पूरा गर्न सकिन्छ कि सकिंदैन भन्ने सवाल महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपाली जनताले कस्तो सपना देखेका छन् र शासनसत्तामा रहनेहरुले कस्तो सपना बाँड्ने गरेका छन् अनि त्यो सपना कति पूरा भएको छ भन्ने प्रश्नले सधैं चिथोरिरहन्छ ।
भारतले नाकाबन्दी लगाएका बेला पेट्रोलियम उत्पादन गरी केही वर्षभित्रै आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरी काम सुरु गरियो । अनि घरका चुलाचुलामा ग्यासका पाइन पुर्याइने पनि बताइयो । काठमाडौ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा ग्यासको खोजी भयो अनि भेटियो पनि । भारतले नाकाबन्दी हटायो सबै योजना सपनामै सीमित भए ।
नेपाल विश्वकै यस्तो देश हो जहाँ पानीसंगै पेट्रोलियम पदार्थ अनि युरेनियम समेत छ । तर न पानीको सदुपयोग हुन सक्यो न पेट्रोलियमको नै । झण्डै चार दशक अघि नेपालमै पेट्रोलियमको सम्भावनाबारे अध्ययन भएको थियो । ती अध्ययनले नेपालमा पेट्रोलियमको प्रशस्त सम्भावना औंल्याएको थियो ।
पेट्रोलियमको पर्याप्त सम्भावना रहेपछि पञ्चायती सरकारले २०४८ सालसम्म नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी योजना अघि सार्यो । विसं २०४० सालमा नेदरल्याण्ड, फ्रान्स र अमेरिकी कम्पनीमार्फत औपचारिक अध्ययन थालिएको थियो । अध्ययनले आधिकारिक रुपमा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ पाइने विभिन्न १० क्षेत्र निर्धारण गर्यो । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको रहस्य पत्ता लागेपछि पञ्चायती सरकारले २०४८ सालभित्र नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेसंगै अन्तिम अन्वेषणका लागि बोलपत्र आह्वान गरीनेदरल्याण्ड र अमेरिकी कम्पनीले मोरंगमा ड्रिलिङ्ग गर्ने तयारी भयो । तर, भारतले २०४५ सालमा नाकाबन्दी गरेपछि सबै तुहियो । परिवर्तनपछिको सरकारले त्यसलाई चासो नै दिएन । अहिलेसम्म यही क्रम छ ।
नेपालको प्रमुख चासो र समस्या भनेको इन्धनको हो । जलविद्युतको अपार सम्भावना भएर पनि त्यसको विकास भएको छैन । पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरता हटाउन विद्युत एउटा प्रमुख उपाय हो । खाना पकाउने ग्यासको पूर्ण विकल्प जलविद्युत हो । त्यस्तै सार्वजनिक सवारी साधन विद्युतबात संचालन गर्न सकिन्छ । तर, यस्तो योजना र कार्यक्रम कसले ल्याउने ? कसले कार्यान्वयन गर्ने, अनि कहिलेदेखि गर्ने ?
नेपालको अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने मुलुकले जति बस्तु निर्यात गर्छ त्यसले पेट्रोलिम पदार्थ आयात गर्न पनि पुग्दैन । यदि मुलुकका ४० लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा नगएको भए मुलुक दशक अघि नै टाट पल्टिसक्थ्यो । तर, पनि चेतना छैन । अर्थशास्त्रका ठूलाठूला गफ चुट्नसक्नेहरुले यस दिशातिर पटक्कै ध्यान दिएका छैनन् ।
भन्नेले भन्ने गर्छन् नेपालमा तेल छैन, अनि बाहिरबाट ल्याउँदा अभाव, महंगो त पर्छ नै । तर, त्यस्तो हैन । नेपालमा प्रशस्त पेट्रोलियम पदार्थ रहेको विभिन्न समयका अध्ययनहरुले देखाएको छ । तर, भारतले नेपालमा आफ्नो अधिकार जमाइरहनकै लागि यहाँको सत्तालाई प्रभावमा पारेर पेट्रोलियम पदार्थको अनुसन्धान गर्न दिएको छैन । अमेरिकी तथा युरोपेली कम्पनीले अनुसन्धान गरे पनि त्यसलाई भारतको दवावकै कारण अघि बढेको छैन । नेपाल भारतको एकलौटी बजार बन्दैगएको छ ।
अध्ययनहरुले के देखाएको छ भने संसारमा पेट्रोलियम पदार्थ पाइने देश मध्ये नेपाल पनि एक हो । नेपालको कुल क्षेत्रफलको ३७ प्रतिशत भूभागमा खनिज तेल रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । नेपालमा सन् १९६० देखि पेट्रोलियम पदार्थको अध्ययन शुरु भएको थियो । त्यसपछि सन् १९७८ मा खानी तथा भूगर्भ विभागले यसको औपचारिक रुपमा अध्ययन अनुसन्धान थालेपछि बल्ल नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ पाइने पुष्टि भएको हो ।
नेपालमा पहिलो पटक विश्व बैंकको प्राविधिक सहयोगमा फ्रान्सको सिजिजी कम्पनीले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालको तराई क्षेत्र, चुरे, महाभारत र भित्री मधेशमा पेट्रोलियम पदार्थ पाइने औपचारिक पुष्टि भएको थियो । पेट्रोलियम पदार्थ पाइने कुरा पुष्टि भएपछि सन १९८२ देखि नेपाल सरकारले यसलाई छुट्टै तरिकाले अनुसन्धान गर्न खानी तथा भूगर्भ विभाग अन्तर्गत पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना स्थापना गरेर काम सुरु गरेको थियो ।
खानी तथ भूगर्भ विभागका अनुसार तराई र चुरे क्षेत्रको सम्पूर्ण भूभागमा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावना देखिएको छ । दैलेखमा प्राकृतिक ग्यासको भण्डार रहेको त त्यहाँ बलिरहेको आगोले नै पुष्टि गरिसकेको छ । यसरी विभिन्न अध्ययनहरुबाट ती क्षेत्रलाई १० ब्लकमा विभाजन गरिएको छ । एउटा ब्लक ५००० वर्ग किलोमिटरको छ ।
२०४० सालमा नेदरल्याण्ड, फ्रान्स र अमेरिकी कम्पनीमार्फत औपचारिक अध्ययन थालिएको थियो । त्यतिबेला ६० हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा ग्राभिटी सर्वेक्षण गरिएको थियो । यही सर्वेक्षणले आधिकारिक रुपमा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ पाइने विभिन्न १० क्षेत्र निर्धारण गर्यो । यस्तो रहस्य पत्ता लागेपछि पञ्चायती सरकारले २०४८ सालभित्र नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेसंगै अन्तिम अन्वेषणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा नेदरल्याण्ड र अमेरिकी कम्पनीले मोरंगमा ड्रिलिङ्ग गर्ने तयारी गरेका थिए ।
यो काम तत्कालीन भारत सरकारले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएपछि सफल हुन सकेन । भारतीय नाकाबन्दीका कारण ती दुवै कम्पनीले आफ्नो काम पूरा हुन नसक्ने बताएर कामबाट फर्किए । नेदरल्याण्ड र अमेरिकी कम्पनीको ग्राभिटी सर्वेको रिपोर्ट थाहा पाएका धेरै देशका दर्जनौं कम्पनीले उत्खनन्का लागि प्रस्ताव गरे पनि तत्कालीन सरकारले यसलाई कुनै ठाउँ दिएन ।
यसबीचमा सन १९९८ मा सरकारले विभिन्न दश केन्द्रमध्ये प्राथमिक अन्वेषणका लागि चितवन र नेपालगञ्ज केन्द्र अमेरिकी कम्पनी टेक्सानालाई चार वर्षसम्मको समय तोकेर जिम्मेवारी दियो । तर, काम भएन । पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण परियोजनाका अनुसार अमेरिकी टेक्सानालाई चार वर्षको समय तोकेर जिम्मेवारी दिइए पनि सम्झौतामा कम्पनीलाई असहज लागेका काम नहुने र त्यो समयावधिमा नजोडिने भन्ने बुँदाका कारण काम सम्पन्न गर्न र उसलाई दावव दिन सकिएको छैन ।
यस्तै सरकारले सन् २००४ मा बेलायती कम्पनी केन इनर्जीलाई धनगढी, कर्णाली, लुम्बिनी, वीरगञ्ज र मलंगवामा अन्वेषणका लागि सम्झौता गरेको थियो । सन २०१२ मा विराटनगरमा अन्वेषण गर्नका लागि अमेरिकी कम्पनी बिबिबी च्याम्पियनलाई र राजविराज तथा जनकपुरमा प्राथमिक अन्वेषणका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्सको इएबिजी कम्पनीसंग सरकारले सम्झौता गरेको छ ।
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार रहेको औपचारिक पुष्टि भएर यसको उत्खनन् गर्न सकिएमा केही वर्षमै नेपालको स्वरुप नै बदलिन सक्छ । तर नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण, अनुसन्धानका लागि न्यून रकम मात्र छुट्टाउने गरेको छ । यसले के देखिन्छ भने सरकारको प्राथमिकतामा पेट्रोलियमको अन्वेषण पर्दैन । यतिबेला तथ्यांक वार्षिक रुपमा अपटेड गर्ने काम मात्र भैरहेको छ ।
सुरुदेखि अहिलेसम्म सरकारले पटक पटक गरेर ३१ वटा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । त्यसमा आधारभूत तथ्यहरुसहितको प्रतिवेदनका आधारमा विभिन्न कम्पनी नेपालप्रति आकर्षित भएका छन् । तर काम भने शून्य छ । विभिन्न दवाव र आर्थिक प्रलोभनले पेट्रोलियमको काम अघि बढ्नै सकेको छैन ।
भएको स्रोतको तत्काल उपयोग गर्नेतिर पटक्कै ध्यान नदिई नयाँ नयाँ नारा र सपना मात्रै बाँडेर देश समृद्ध हुँदैन । देशमा पेट्रोलियमम छ, तर उत्पादन छैन, अपार जल छ, विजुली छैन उपत्यकामा ग्यास छ, तर सदुपयोग छैन । छ त केवल सपना बाँडिएको छ ।
(२०७२ सालमा प्रकाशित यो सामग्री अध्यावधिक गरिएको हो)